Socdaalka Dalxiisku waxa uu bilaabay Platform-ka Safarka Shakhsi ahaaneed ee Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Safarka Dalxiisku waxa uu bilaabay Platform-ka Safarka Shakhsiyeysan ee Aduunka
Safarka Dalxiisku waxa uu bilaabay Platform-ka Safarka Shakhsiyeysan ee Aduunka
Safarka gaarka ah
Maaddaama warshadaha socdaalku ay ka barteen dariiqa adag ee ku saabsan masiibada Covid-19, dabacsanaantu waxay muhiim u tahay badbaadada xilliga faafa. Malaha waax aan la kulmin wax dhibaato ah oo la mid ah warshadaha dalxiiska caalamiga ah, sida shirkadda ka dambeysa Dalxiiska Israel, oo ah shirkadda dalxiiska online-ka ah ee Israa'iil, ay si fiican u caddayn karto. Iyada oo laga jawaabayo xiritaanka guud ee Israel ee dalxiiska, shirkaddu waxay diiradda saartay adduunka intiisa kale. Hadda waxa ay bilawday hawl kale oo ciyaarta beddeleysa oo ka faa’iidaysata tignoolajiyada si ay u abuurto badeecad socdaal oo caalami ah oo gaar ah. Socdaalka Dalxiiska waa madal socdaal oo hi-tech ah oo bixisa safaro maalmeed, xirmo maalmo badan, iyo hoteelo loogu talagalay in lagu siiyo socotada wax garadka ah waxa ugu wanaagsan ee ay u socdaan. Iyada oo la raacayo liiska 20 waddan oo koraya, socdaalayaashu waxay heli karaan safarro aad u wanaagsan iyo waayo-aragnimo ay hoggaamiyaan hagayaasha maxalliga ah ee dhabta ah, oo u heellan inay siiyaan booqdayaasha inay la kulmaan waddankooda. Socdaalka Dalxiiska waa mid aad u xiiseeya in la siiyo socotada wax ka baxsan khibradda dalxiiska caadiga ah, iyo wax-bixinteeda ayaa ah mid dhab ah oo taas ka tarjumaysa.
"Waxaan bilownay Safarka Dalxiiska si aan wax u samayno si ka duwan," ayuu yiri Ben Julius, Aasaasaha Socdaalka Dalxiiska. “Ma jiraan wax sidan oo kale ah. Google waxa ay ahayd mid xad dhaaf ah oo wakhti badan qaadanaysa, badi wakiilada socdaalkuna ma ay fahmin waxa aanu rabno socdaal ahaan – hadii ay yeeleenna waxa ay ku timid qiimo aad u badan. Markaa waxaan dhisnay xalka dhibaatada. Ahmiyadayadu waa in aan ku bixino khibradaha ugu fiican, alaab la aamini karo, iyo adeeg aan la barbar dhigi karin oo qiimo soo jiidasho leh. Annaga, raaxada cusub waxay ka dhigan tahay shaqsiyeeyay, la habeeyey, oo dhab ah. Safarka Dalxiiska, shakhsiyaynta-dhamaadka sare leh iyo xaqiiqadu uma baahna inay la timaado sumad qiimo sare leh."
Iyada oo ay weheliso xulashada dalxiisyada iyo xidhmooyinka, Socdaalka Dalxiiska ayaa soo bandhigay muuqaal cusub oo aasaasi ah, Abuur Socdaalkayga si aan u abuuro baakadaha dalxiiska ee gaarka ah. Qalabkan ciyaarta beddela, farsamada-farsamada marka hore, waxay u oggolaanaysaa qof kasta inuu hagaajiyo safarkiisa gaarka ah oo dhammaystiran oo leh hoyga huteelada, dalxiisyada, khibradaha, iyo gaadiidka. Ka dib markuu qofka musaafurka ah ka jawaabo dhawr dardaaran oo ku saabsan meesha uu u socdo, dhererka safarka, xiisaha, waayo-aragnimada la rabo, iyo qaabka safarka, Abuur Safarkaygu waxa uu abuuraa qorshe safar oo dhamaystiran wax ka yar 3 daqiiqo, kaas oo qofka socotada ah uu wax ka beddeli karo, wadaagi karo oo uu isla markiiba buug ku qori karo. Isku-dubarid algorithms-ka adag oo leh liis cajiib ah oo dalxiiska iyo la-hawlgalayaasha martigelinta adduunka oo dhan, Socdaalkaygu wuxuu hagaajiyaa habraaca sida caadiga ah u baahan doona shaqaaleysiinta wakiilka socdaalka dhaqameed ama saacado dheer oo cilmi-baaris madax-bannaan iyo qorshayn ah, oo loo beddelo hab degdeg ah, madadaalo, iyo hawl fudud. Tusaale ahaan, nin taariikhda jecel khamri-jecel oo rabay inuu helo a safarka xirmo ee Italy muddo afar maalmood ah waxay dhalin kartaa safar caado ah oo ku qaada dalxiisyada khamriga, dhadhanka, iyo dalxiisyada socodka magaalooyinka oo muujinaya jeexyo taariikhi ah, oo leh noocyo kala duwan oo hudheelo ah oo aad u fiican meel kasta. Abuur Socdaalkeyga waa mid gaar u ah awooda ay u leedahay isticmaalka tignoolajiyada laakiin joogteyso dareenka shaqsiyadeed, maadaama safar kasta iyo waayo-aragnimada si taxadar leh loo doortay oo ay shaandheeyeen khubarada socdaalka Dalxiiska. U oggolaanshaha socotada inay ku ballansadaan dhinacyo badan oo safarkooda ah daqiiqado gudahood waxay hubisaa isku-duubni, sahay ahaan siman, iyo waayo-aragnimo aan walwal lahayn. Wali waa bilawga ciyaarta, laakiin mar hore waa ammaan in la sheego in Socdaalka Dalxiiska uu ku wajahan yahay inuu noqdo ciyaaryahan fure u ah mustaqbalka safarka iyo dalxiiska.